အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု PVC အေးသိုလှောင်တံခါးပေါက် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အေးသိုလှောင်တံခါးပေါက်,PVC အေးသိုလှောင်တံခါးပေါက်,insulator တွင်လည်းအေးသိုလှောင်တံခါးပေါက်
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > အေးသိုလှောင်ခန်းအမြန်တံခါး > အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု PVC အေးသိုလှောင်တံခါးပေါက်
အစာရှောင်ခြင်းအအေးကွင်းဆက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဧရိယာများအတွက်ပြည်တွင်းရေးအမြန်တံခါးကိုချွေတာ insulator တွင်လည်းနှင့်စွမ်းအင်
, စွမ်းအင်ကိုကယ်တင်ကူညီပေးသည်လေကြောင်း convection လျော့နည်းစေနှင့်ဆူညံသံလျော့နည်းစေသည်။
အဆိုပါပျော့ကုလားကာအမြန်အအေးသိုလှောင်မှုတံခါးကိုရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပြီးနိမ့်သောအပူချိန်အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ချောမွေ့နှင့်အကျိုးရှိစွာစစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်တစ်အပူအင်တိဖရိစ်ဓါတ်စက်ကိရိယာနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံမှာ Anti-တိုက်မှုပြန်လည်နာလန်ထူ၏ function ကိုထည့်သွင်း။ တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်မတော်တဆထိခိုက်သောအခါကခြေရာခံများနှင့်အလိုအလျှောက်ပြုပြင်ပုတက်စဉ်အတွင်းနေအိမ်များမှ deviates ။ ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်ရန်တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်ကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲထက်ပို 150,000 ကြိမ်တစ်နှစ်လည်ပတ်မသာ။ အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များလျှော့ချနေချိန်တွင်၎င်းသည်ထုတ်ကုန်၏ဘဝအသက်တာကိုတိုးချဲ့။
အပူယန္တရား၏ဒီဇိုင်းနှင့်လျှောက်လွှာနောက်ထပ်တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးသေချာနှင့်တစ်ဦးအနိမ့်အပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တံခါးကိုကိုယ်ခန္ဓာ၏ထိရောက်မှုအလုပ်လုပ်ကိုင်, တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မကြာခဏစစ်ဆင်ရေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အပူလဲလှယ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်လမ်းညွှန်ရထားလမ်း၏ခဲကိုရှောင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ထိုသို့လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ box ကိုသုံးစက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ရန်နှင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ပြီး, Double တစ်ဦးအနိမ့်အပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အလုပ်လုပ်စွမ်းဆောင်ရည်အာမခံပါသည်။
တစ်ဦးမတော်တဆထိခိုက်မှု၏ဖြစ်ရပ်မှာကုလားကာလွဲချော်ရပ်တန့်နိုင်ပြီးအလိုအလျှောက်ကို manual ပြုပြင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်ပြန်စခြင်းသည်မရှိပဲ, တက်နေစဉ်အတွင်း reset ။
အဖွင့်မြန်နှုန်း 0.6-2.5M / S ကများနှင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်
မြန်နှုန်း 0.6-1.2m / S ကိုပိတ်ပြီးနှင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်
high-အစွမ်းသတ္တိကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး polyester ဖိုင်ဘာပစ္စည်းအလယ်မှာမျက်ရည်-ခံနိုင်ရည်ထည်နှင့်အတူထည့်သွင်းထားသည်။ အပြာနှင့်အပြည့်အဝပျော့ကုလားကာအဆိုပါခြုံငုံထူ 1mm ထက်လျော့နည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါဆန့အစွမ်းသတ္တိကိုမြင့်မားသည်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုကောင်းလှ၏။ ကုလားကာမြေမှုန့်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ငြိမ်လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်ဖို့အတူတကွပွတ်သပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ insulator တွင်လည်းပစ္စည်းဖြည့်ပါ။ သက်ဆိုင်အပူချိန်: -30 ~ + 70 ° C မှ။
အဆိုပါလမ်းကြောင်းသံမဏိနှင့်သွပ်ရည်စိမ်ဆေးသုတ်ထားသဖြင့်, မျက်နှာပြင်မှုန်ရေမွှား-coated သံချေးကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တံခါးကိုအစိတ်အပိုင်း insulator တွင်လည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပင်ကြမ်းတမ်း enviroments မှာရေစိုခံခြင်းနှင့် dustproof ဖြစ်နိုငျသညျ, IP54 တွေ့ဆုံရန်နှင့်အထက်, နှင့်အမျိုးသားရေးလျှပ်စစ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်မှုဇုန်တံခါးကို HOFIC မော်တာစနစ်၏ပါဝင်ပါသည်: ကြီးမားသောဝန် S4 ကို type ကိုတင်ဆောင်အစာရှောင်ခြင်းတံခါးသည်မြန်နှုန်းမြင့်မော်တာ, ပါဝါထောက်ပံ့ရေး 220V, ပါဝါ 0.75kw / 750 Rev / S က။ လျှပ်စစ်ဘရိတ်စနစ်၏ဆုံးရှုံးမှု; လျှော့ချ; လက်စွဲလွှတ်ပေးရန်ယန္တရား; လက်စွဲကိရိယာစသည်တို့အပြစ်တင်, မော်တာစဉ်ဆက်မပြတ် torque ကို output:
1, Overload စွမ်းရည်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ပါသည်, တချို့က high-အကြိမ်ရေအခါသမယတွင်, switch သည်ထက်ပိုမို 2000 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ 2,2000 လိုင်းများနှင့်မော်တာ၏အစာရှောင်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာများ၏မြင့် resolution ကို resolution ကိုထိထိရောကျရောတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအမှားအယွင်းများ၏ပြဿနာကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
3. ထိုလက်စွဲစာအုပ်လွှတ်ပေးရန်ယန္တရားတစ်ခုအမှားသို့မဟုတ်ပါဝါပျက်ကွက်နေစဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ခံရနိုင်ပြီး, တံခါးကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်တစ်ခုစံပြအနေအထားရှိသည်ဖို့ပိတ်လိုက်သည်။
1. အဆိုပါစနစ်ကို LED ပြွန်မှတဆင့်အမှားကုဒ် function ကိုပြသ;
2, စတီယာရင်ကာကွယ်မှု: အမော်တာ drive ကိုလိုင်းမှားယွင်းစွာချိတ်ဆက်သောအခါ, Controller ကိုတိုက်ရိုက်မှားယွင်းမှုတစ်ခုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နှင့်တံခါးကိုမရွှေ့ပါဘူး,
3 အရ, torsion လက်စွပ်, ရာထူးလက်စွပ်အမြန်နှုန်းလက်စွပ်နှင့်သုံးကွင်းအပြည့်အဝတံခါးပိတ်ပါ၏
တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်ကန့်သတ်အနေအထားမှာရပ်နိုင်အောင် 4, ဘရိတ် function ကိုနိုင်စွမ်း, လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ် pad ပါမရှိပဲ, မော်တာ, မျှော်မှန်းအနေအထားမှာရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်
ရှန်ကျန်း Hongfa အလိုအလျောက် Co. , .Ltd ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအဆင့်မြင့်အော်တိုတံခါးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင်ပါဝင်နေသည်တစ်ဦးက high-tech ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်အမြန်လှိမ့တံခါး, စက်မှုဇုန်စုဆောင်းခြင်းတံခါး, စက်မှုဇုန်ကိုလှိမ့တံခါး, PVC ပါဝင်သည်
လှိမ့်တံခါး, လျင်မြန်စွာလှိမ့တံခါး, မီး-ခုခံလှိမ့တံခါး, စက်မှုဇုန်ဓာတ်လှေကားတံခါး, အော်တိုသော induction တံခါး, အော်တိုဒေါင်လိုက် hinge တံခါးကို, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလိုအလျောက်တံခါး, သံမဏိအလိုအလျောက်တံခါး, လျှပ်စစ်ခေါက်တံခါး, ကျောက်သလင်းကိုလှိမ့တံခါးကို၏လျှပ်စစ် roller ရှပ်
ရေခဲသေတ္တာ ROOM တွင်ကိုယ်ပိုင်လျှော်ကြေးကုလားကာမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု PVC အေးသိုလှောင်တံခါးပေါက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း PVC ရေခဲသေတ္တာအခန်းတံခါးပေါက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အေးခဲနေသော PVC ကုလားကာအစာရှောင်ခြင်းအလိပ် Up ကိုတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အေးသိုလှောင်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC အစာရှောင်ခြင်းကိုလှိမ့ဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ်တံခါးကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အေးသိုလှောင် Rapid တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အေးသိုလှောင်တံခါးပေါက် PVC အေးသိုလှောင်တံခါးပေါက် insulator တွင်လည်းအေးသိုလှောင်တံခါးပေါက် အေးသိုလှောင်ဂိုဒေါင် PVC အေးသိုလှောင်တံခါး မြန်မြန်မြန်တံခါးပေါက် အေးသိုလှောင် Rapid တံခါး အလိုအလျောက်တံခါးသော့ခတ်